विहेको अघिल्लो दिन यी ४ कुरा सोच्छन् युवती - Tufan Media News
१६ माघ २०७६, बिहीबार १४:०६
जब कोही युवती विहे बन्धनमा बाँधिन गइरहेकी छन् भने उनको मनमा कैयौं कुराहरु खेलिरहेका हुन्छन् । सबैभन्दा पहिले उनीहरुको मनमा विहेको पहिलो रात खेल्ने गर्छ । जसले मुटुको धडकन नै बढ्छ । हेर्नुहोस् विहे भन्दा पहिले युवतीको मनमा खेल्ने कुरा
विहेलाई लिएर युवतीको मनमा विभिन्न कुराहरु खेल्नु स्वभाविक हो । मानिसलाई लाग्न सक्छ युवती विहेपछि ह निमुनको बारेमा सोच्छन् । तर, यस्तो हुँदैन । उनीहरुको मनमा के आफू विहे गरेर ठूलो जिम्मेवारी लिने भइसकेछु र ? के विहेका लागि आमा बाबुसंग समय माग्नुपर्छ ? लगायतका प्रश्नहरु उब्जिन्छन् ।
यौ* न स म्पर्कलाई कसरी नकार्ने
विहेपछि श्रीमान श्रीमतीबीच यौ* न सम्बन्ध हुनु स्वभाविक हो । तर, युवती विहेको अघिल्लो दिन नै यसबारेमा चिन्तित हुने गर्छन् । युवती पहिलो रातमा आफ्नो हुनेवाला श्रीमानसंगको यौ* न स म्पर्क कसरी रोक्न सक्छु र भन्ने बारेमा सोच्ने गर्छन् ।एजेन्सी